Niile - OMG Solutions
SPY324 - OMG 4G LTE Ikuku WiFi Nche onyunyo Home Igwefoto na Night Night, 2 Audiozọ Audio
OMG Igwe Ntinye Aka Ntinye Obere nke OMG nke OMG (SPYV018)
3G WCDMA Voice Recorder na Micro SD Kaadị oghere
Mee na 5000mAh Lithium-Polymer batrị
Ihe ngosi mmiri na-eji mgbidi dị ike rụọ
Ọ bụ nhọrọ kacha mma nke ndị uwe ojii & onye nyocha.
Examdị Nlele nke:
Ederede Olu Ọkachamara
Nkuzi nkuzi / ngosi
Ụgbọaka / ihe ndekọ ụgbọ
Ihe akaebe na-egosi
1. Na-akwado idekọ ụda olu 100 awa na-aga n'ihu ma ọ bụ ruo ọnwa 3 n'ime ụgbọ ala (na-arụ ọrụ elekere 1 kwa ụbọchị).
2. Kaadị SDNUMXGB SD kacha akwado
3. Ihe ngosi mmiri na-eji mgbidi dị ike rụọ.
4. Mbara batrị nke 5000mAh nke batrị lithium na-eguzogide. Na-eme ka ngwaọrụ rụọ n'ime ụgbọ ala ebe a na-enwe oke ikuku.
5. E wuru na mkpu nkpatu.
a) Ọnọdụ ndekọ Ọnọdụ
Mgbe onye na-edekọ akụkọ ahụ na-achọ ụda ntụrụndụ, ọ ga - amalite ndekọ ozugbo.
b) Usoro ordingdekọ oge
Dabere na nhazi ọkwa, onye na-edekọ ga-amalite ndekọ na oge enyere.
c) Ọnọdụ ndekọ GSM nke GSM
Obodo ọrụ iji malite ndekọ site na oku ekwentị ma ọ bụ SMS.
Ọnọdụ 2.Multi-ihi ụra:
3. Igwe nyocha ụda
Ndekọ a ga-abụzi otu nchekwa ekwentị rue ụbọchị.
5. Mkpu enyemaka ejiri arụ ọrụ
Ozugbo esochiri track n’agide n’elu igwe maka sekọnd iri na ise, a ga-eme ka ọrụ mkpu iji rụọ ọrụ na akpaghị aka. Ozugbo ngwaọrụ gwụsịrị, ọ ga-eme ka ọnụ ọgụgụ echetara site na SMS ma ọ bụ kpọọ ekwentị.
6. Ihe ngosi mmiri na-eji mgbidi dị ike rụọ
7. Oge Ogologo Oge
Na-akwado 100 awa na-aga n'ihu na-aga n'ihu ma ọ bụ ruo na 3 ọnwa ntinye ụgbọ ala (rụọ ọrụ 1 awa kwa ụbọchị).
Nbanye DC: USB 5.0V 1000mA
Batrị Ekekọrịta: 3.7V / 5000mAh
Nchaji Time: 3 ka 5 awa
Ike ndekọ: Na-aga n'ihu 100 awa na-edekọ 1 ụgwọ
Usoro ntinye ederede: Ụdị WAV
Memory: Kwado na 32GB micro SD kaadị
Olu olu: 192Kbps / 64Kbps / 32Kbps
Oge Nkwado Oge Nkwado: 32Kbps / 580 awa; -64Kbps / 290 awa; 192Kbps / 96 awa
Ebe ederede: Bulit-in Automatic Gain Control na-akwado aka ruo 10M ndekọ anya.
Njikọ: Obere Ogwe USB
Ìhè Flash: LED 0.1W
Usoro Nkwado: Windows XP / VISTA / WIN 7 / 8.1
Nchekwa Nche: -20 ka 85 Celsius C
Tempụ ọrụ: 0 gaa 55 Celsius
poolu: N'ụlọ, GPRS Klas 12
ike: Fanye 5000mAh Batrị Lithium-Polymer
SPY331 - Ike Igwefoto Wi-Fi
A na-ejikarị kamera zoro ezo zoro ezo ebe ndị ọrụ anaghị achọ ka onye ọ bụla mara na a na-ele ya. Igwefoto Wi-Fi igwe eletrik abụghị naanị igwefoto zoro ezo na-ebi ndụ, kamakwa ụlọ akụ na-arụ ọrụ ike iji buru maka chaja ngwaọrụ mkpanaka. Ọ na - arụ ọrụ n'ime ụlọ maka nchekwa ụlọ na igwefoto Nanny, ma ọ bụ ọfịs maka onye nwe ụlọ ahịa iji chebe nzuzo, enweghị mmasị na ụlọ zoro ezo; Ihe niile a na-achịkwa na mkpịsị aka gị na anya nke ukwuu iji lelee vidiyo vidio na-adị n'ịntanetị na ehihie na abalị, yana nchọpụta mmeghari mkpu na-eme ka ọ bụrụ ezigbo oge.
Igwefoto nchekwa ụlọ akụ ike
Nkọwapụta 1.0 Mega HD 1080P
Wi-Fi P2P Live gụgharia Video
Ngwa na-ese vidiyo na foto na-egwu ala
N'ime ime 5000mA, batrị awa nke 10
6M nke anya abalị na-adịghị ahụ anya
Ihe oghere Ihe: 1.0 Mega CMOS
Video Mkpebi: 1280 * 720, 15fps
Mwepụta usoro: MJPEG
Vidio na Audio: nkwado
Igwe okwu: nkwado
Nchekwa Mpụga: Max 128GB
Lee mmụọ ozi: 120 ogo
Nchọpụta Motion: Nkwado na foto & mkpu msgs pushing
SPY318 - OMG Ikuku N'èzí Ikuku 3G 4G nche ip Igwefoto na Kaadị SIM / SD Kaadị oghere Solar Kwadoro Igwefoto CCTV
Tags: H.264 Video Compression Nchọpụta Motion
Igwefoto WIFI Smart Doorbell, Hisilicon 3518E Chipset, PIR ihe mmetụta, Nightvision, Okwu abụọ (SPY303)